दीपकलाई जन्मदिनभन्दा नयाँ वर्ष प्यारो
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, वैशाख १ print
पोहोरसम्म दीपकराज गिरीको जन्मदिनलाई नयाँ वर्षले टप्थ्यो! यस वर्ष नयाँ वर्षलाई जन्मदिनले उछिनेछ। कारण रहेछ– ६क्कापञ्जाले अरु थुप्रै कुरालाई छायाँमा पारिदियो। ६क्कापञ्जाकै कारण नयाँ वर्षलाई जन्मदिनले उछिनिदियो।
‘पोहोरसम्म नयाँ वर्षका शुभकामना मात्र आउँथे,’ जन्मदिन तथा नयाँ वर्ष मनाउन परिवारसँगै विदेश भ्रमणमा रहेका गिरीले सेतोपाटीसँग भने, ‘वैशाख १ मा मेरो जन्मदिन हो भन्ने धेरै कमलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो। यसपालि मैले नचिनेका हजारौं शुभचिन्तकले फेसबुकमा जन्मदिनको शुभकामना पठाउनुभएको छ।’
दीपकले ठट्टा गरिहाले, ‘त्यसैले, वर्षौंसम्म छायाँमा परेको जन्मदिनले यसवर्ष नयाँ वर्षलाई नै छायाँमा पारिदियो।’
हुन त. दीपक आफैं पनि वैशाख १ लाई जन्मदिनभन्दा नयाँ वर्षका हिसाबले बढी विशेष मान्थे। उनी साल सकिनै लाग्दा वर्षभरि आफूले गरेका कामहरुको समीक्षा गर्छन्। सफलता–असफलता नाप्छन्। उनको ध्यानमा वैशाख १ भनेको नयाँ वर्ष नै हो, जन्मदिन त्यसपछिको कुरा हो।
‘जन्मदिन त सबैको एउटा-एउटा हुन्छ,’ दीपकले भने, ‘तर, नयाँ वर्ष सबैका लागि एक दिन मात्र आउँछ। सबैले पुराना दिनको समीक्षा र नयाँ योजनाका साथ उमंग मनाउँछन्।’
‘हत्तपत्त जानेर त गल्ती गर्दै गर्दिनँ,’ उनले थपे, ‘नजानेर, अझ अरुका गल्तीमा पनि आफू जोडिन पुगिँदो रहेछ। जस्तो, ६क्कापञ्जाको पाइरेसी काण्डः जसमा एक युवकले आत्महत्या गरे। म नयाँ वर्षका दिन वर्षभरि आफूले के सिकेछु र के सिक्नुपर्ने रहेछ भनेर आफैंलाई मुल्यांकन गर्छु।’
दीपकले ०७३ लाई मुल्यांकन गरिसकेका छन्। करिब १६ करोड कमाएको भनिएको फिल्मका निर्माता तथा अभिनेता गिरीले आफ्नो वार्षिक हिसाबकिताबमा राम्रै अंक चढाएका छन्। दशैंमा रिलिज मिति तोकिसकिएको छक्कापञ्जा २ बाट निश्चलदेखि चर्चित हास्यकलाकारसम्मको जम्बो टोली उतार्न लागेका उनले यो वर्षलाई बडो चुनौतिपूर्ण वर्षको रुपमा खातामा टिपोट गरेका छन्।
‘पोहोरका नयाँ वर्षका दिन म हलुका हुन्थेँ,’ रमाइलो मुड बनाउन विदेश यात्रामा रहेका दीपकले भने, ‘यो वर्ष भने वैशाख १ गतेदेखि नै बोझ थपिएको महसुस भएको छ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १, २०७४ २०:१०:४४